बलात्कारी 'सिद्धबाबा' लाई सफाई दिने जिल्ला न्यायाधिशको बढुवा ! - Kantipath.com
बलात्कार मुद्दामा विवादास्पद फैसला गरेका जिल्ला न्यायाधीश उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । न्यायपरिषद्को बैठकले जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा सिफारिस गरेको हो । न्यायपरिषद्का सदस्य रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उनको सिफारिसमा असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।
Previous Previous post: रेलका हाकिमको धम्की, ‘आगोसँग खेले भष्म भइन्छ’ !
Next Next post: ‘एमालेमा ठुलो भुकम्प आउनै बाँकी छ’ !